Ihowuliseyili sinayo "Imfihlo yokuNencasa eNkulu" yokukuxelela umzi mveliso kunye nabavelisi | NGCONO
Sine "Imfihlo yokuNencasa enkulu" yokukuxelela
Ukuthandana kwakhona kwi-2018 ngelixa uphawu lwetekhnoloji ye-FEELM lwalusekwe ekuqaleni, "KwiPod elandelayo" kwacetyiswa njengegama lesilo. Ukunikezela ngomgangatho weprimiyamu kunye namava, ipod elandelayo eqhutywa yitekhnoloji ye-FEELM yayikukukhetha okungcono kubasebenzisi bezigidigidi kwihlabathi liphela.
Ukusukela ngoko, siye saqesha iinjineli eziphambili ze-R & D kwaye sasebenzisa isayensi esisiseko enje ngezinto, i-hydromechanics, i-aerodynamics kunye ne-thermodynamics ukwakha iqonga lobuchwephesha be-atomization.
Kule mihla, unokufumana iipods ezivaliweyo nge-FEELM cilic coil kwihlabathi liphela. Amaqabane ethu abambe izabelo zentengiso ezingama-70% nama-30% ngokwahlukeneyo kwimarike yaseTshayina naseMelika. Kodwa asize siyeke ukuphonononga iimfuno zabathengi. Yintoni eyona nto bayifunayo? Bajonge ntoni? Ngaba siyakwazi ukwanelisa iimfuno zabo ngokwenza inkqubela phambili kwitekhnoloji?
Icandelo 1 Yintoni esiyifumeneyo?
Ekuqaleni kuka-2020, i-FEELM yasungula uphando lwehlabathi kwaye yaqokelela amawaka amaphepha empendulo. Ngeli xesha sifunde uninzi lweengxelo zophando lobuchule kunye nezimvo.
Kwaye safika kwisigqibo sokuba abathengi 'ekugqibeleni bayayithanda.
Ukusukela oko imidumba evaliweyo ilayishwe ngetekhnoloji ye-FEELM yaphehlelelwa ekuqaleni kuka-2018, besithe gqolo ukuqokelela ingxelo evela kumashumi amawaka wabasebenzisi bokugqibela. Ngokusekwe kuhlalutyo olunamacala amaninzi kunye nothelekiso, sifumanisa ukuba bakhetha imidumba eqhutywa ziiFoyile zekheram ye-FEELM ngaphezulu kwezinye iimveliso zetekhnoloji yokufudumeza, ngakumbi kubungakanani ngokubhekisele kwincasa efana nokuthamba, ukuvuza, ukusebenza ngokukuko kwe-nicotine kunye nokungaguquguquki.
Impendulo evela kumashumi amawaka abathengi ibonisa ukuba olona ncedo lukhulu kwiimveliso ezine-FEELM ngaphakathi zilungile kakhulu. Ngelixa imfihlo efihliweyo yencasa enkulu ilele kwi-FEELM Ceramic Coil.
Icandelo 3 Imfihlelo yokuNambitha ngokuKhulu
Itekhnoloji yokufudumeza yenza ubomi bethu bube ngcono kwaye u-FEELM wenza ukuba incasa yomphunga ibengcono.
Namhlanje, i-FEELM iphinda ichaze iteknoloji yokufudumeza, idityaniswe netekhnoloji yokusika kwaye izuze umoya wobukrelekrele. Ukusuka kwikhoyili yokuqala ukuya kwiwaka lewaka lezigidi, i-FEELM iyahambelana nomgangatho ophezulu, ihambisa amava awodwa omphunga kwihlabathi liphela.
FEELM ICeramic Coil, Imfihlo yokuNambitha ngokuKhulu.
Asisoze Sayeka Ukuphonononga Imfihlelo Efihliweyo.
Ukutshaya enye indlela, Isigarethi soLwelo esiTywala, Newport E umdiza, Iicigarete zobushushu, Ipakethe yeBlister ye-cigarette, Epen,